यसरी सजिलै थाहा पाउनुहोस् प्रेमीकाको यौ’न चाहना, दिने गर्छन यस्ता संकेत — Sanchar Kendra
यसरी सजिलै थाहा पाउनुहोस् प्रेमीकाको यौ’न चाहना, दिने गर्छन यस्ता संकेत
प्रेमीकाहरु भावनाहरुलाई प्रेमको अभिव्यक्ति सम्झिछन् साथै उनीहरु प्रेमीले आफ्नो यौ;न चाहनालाई आँफै बुझोस र मायालु व्यवहार गरोस भन्ने चाहन्छन् ।
युवतीहरु से’क्समात्रै होइन एक रोमान्टिक माहौल चाहन्छन्
युवतीहरुलाई आनन्ददायक से’क्स लाइफको लागि यौ’न’सम्पर्क मात्रै होइन आफ्नो प्रेमीको साथमा बिताएको हरेक क्षणमा रोमान्टिक पलहरु र मायालु व्यवहारको पनि आवश्यकता हुन्छ ।
युवतीहरुलाई आफ्नो प्रेमीले बाहिर भेट्दा पढाई, करियरको मात्रै कुरा गरेको र फेरि एकान्तमा भेट्नसाथ सेक्सको चाहना गरेको कहिल्यै पनि मनपर्दैन । यदि प्रेमीले यस्तो मात्रै गर्छ भने युवतीहरुको मनमा आँफू उनीहरुको यौ’न इच्छा पुरा गर्ने एक खेलौनामात्रै भएको जस्तो भावना आउँछ । यस्तोमा उनीहरु आफ्नो प्रेमीलाई धेरै स्वार्थी र आँफैलाई भोगको वस्तु सम्झिन थाल्छिन् ।
हरेक प्रेमीकाले आफ्नो प्रेमीले केवल से’क्सको लागि मात्रै हाइन बरु मनैदेखि धेरै माया गरोस् भन्ने चाहन्छन् । आफूलाई धेरै ध्यान देओस् भन्ने चाहन्छन् त्यसैले उनी सँग आफ्ना कुराहरु सेयर गर्नुहोस्, प्रेमपूर्वक कुराहरु गर्नुहोस् र उसको भावनाहरुलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् ।
प्रेमीले समयसमयमा सानोसानो उपहारहरु दिने, बाहिर कफी पिउन जाने, लञ्चडिनर गराउन लैजाने, सिनेमा हेर्न लैजाने गरेमा प्रेमीले आफूलाई महत्व दिन्छ भन्ने प्रेमीकाले बुझि्छन् । यस्तो भएमा प्रेमीका पनि से’क्सको समयमा पूरै समर्पित हुन्छिन् । यस्तोमा से’क्सको मजा पनि कैयौं गुणा धेरै हुन्छ ।
यौन स्वास्थ्य सँग सम्बन्धित
किन हुन्छ सपनामा से’क्स ? यस्ता छन् रोचक कारण
एक से’क्स एडिक्ट महिलाको बयान- एक दिनमै छ/सात जनासँग से’क्स गर्थे
सम्भोगपछि बाथरुम छिरेर किन रुन्छन महिलाहरु ? पत्ता लाग्यो कारण, पुरुषहरुले थाहा पाउनुपर्ने
यी हुन् ‘हर्ट अट्याक’सँग जोडिएका १० खतरनाक लक्षण
के हो कोलेस्ट्रोल ? यस्ता छन् कारण र बच्ने उपाय